Qarax Ciidamada Itoobiya Lagula Beegsaday Gobalka Galgaduud. – Bogga Calamada.com
Qarax Ciidamada Itoobiya Lagula Beegsaday Gobalka Galgaduud.
March 29, 2017 8:06 am Views: 12
Wararka laga helayo gobalka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah gobalkaasi qarax culus lagula beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya oo ku socdaalaayay wadada isku xirta degmooyinka Dhuusamareeb iyo Ceelbuur oo ka wada tirsan gobalka Galgaduud.
Qaraxa waxa uu sigaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka Ceel-qooxle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Ceelbuur’iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobalka Galgaduud.
Qaraxa oo loo adeegsaday Miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago waxaa la xaqiijiyay iney haleeshay oo ay burburisay mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ay wataan ciidamada Xabashida Itoobiya.
Kolanyadaan oo saddex maalin ka hor kasoo baxday degmada Dhuusamareeb ayaa qorshahuuda waxa uu yahay iney gaaraan degmada Ceelbuur’waxeyna tani muujineysaa sida Xabashida Itoobiya ugu fashilantay duulaankii saddex sano ka hor ay kusoo qaaday degmada Ceelbuur ee gobalka Galgaduud.